Barcelona Oo Si Naxariis Daro Ah U Xasuuqday Kooxda Celta Vigo & Coutinho Oo Daawaday Xasuuqa Saaxiibadii Gaysteen – Kooxda.com
Home 2018 January Spain, Wararka Maanta Barcelona Oo Si Naxariis Daro Ah U Xasuuqday Kooxda Celta Vigo & Coutinho Oo Daawaday Xasuuqa Saaxiibadii Gaysteen
Barcelona Oo Si Naxariis Daro Ah U Xasuuqday Kooxda Celta Vigo & Coutinho Oo Daawaday Xasuuqa Saaxiibadii Gaysteen
Kooxda Barcelona ayaa guul weyn oo raaxo leh ka gaartay kooxda Celta Vigo kulan ka tirsanaa lugtii 2-aad ee tartanka Copa Del Rey-ga kulan ka dhacay garoonka Camp Nou.
Barcelona ayaa si dar-dar leh ku bilaabatay ciyaarta iyaga oo isla markiiba weerar waali ah ku bilaabay kooxda Celta Vigo iyaga oo doonayay in ay goolal wakhti hore ah dhaliyaan.
Blaugrana ayaan wax badan sugin in ay dhaliso goolkeeda 1-aad iyaga oo uu daqiiqadii 13-aad goolka 1-aad u dhaliyay xiddigooda Lionel Messi isaga oo ciyaarta ka dhigay 1/0 ay Barcelona hogaanka ku hayso.
Barcelona ayaa 2 daqiiqo kadib gaar ahaan daqiiqadii 15-aad soo laabatay iyaga oo dhaiyay goolkii 2-aad oo uu u dhaliyay Lionel Messi oo ciyaarta ka dhigay 2/0 iyada oo waliba labada gool ee uu Messi uu dhaliyay uu labadaba caawiye ka ahaa daafaca Jordi Alba.
Lionel Messi ayaa abaalkii Jordi alba u guday isaga oo daqiiqadii 28-aad ka caawiyay in uu goolka 3-aad dhaliyay iyada oo uu alba ciyaarta ka dhigay 3/0.
Kooxda Celta Vigo oo gabi ahaanba garan la,a meesha ay wax ka khaladameen ayaa qaadaysay weeraro rogaal celis ah laakiin weerarkooda ayaan ahayn mid midho dhal ah maadama uu daafaca Barceloan ku ban jarayay.
Barcelona ayaa mar kale dhalisay goolkeedii 4-aad iyaga oo uu u dhaliyay weeraryahanka Luis Suarez kaas oo ciyaarta ka dhigay 4/0 ay Barcelona hogaanka ku hayso.
Waxa sidaas ku dhamaatay qaybtii hore ee ciyaarta oo ay kooxda Barcelona wakhti hore oo qaybta hore ee ciyaartaba guusha sii xaqiiqsatay.
Qaybtii dambe ee ciyaarta ayay kooxda Celta Vigo ku bilaabatay si dar-dar leh iyaga oo ka khatarsanaa sidii qaybtii hore laakiin kubadohooda ayaan dhaafayn daafaca Barcelona.
Dhanka kale Barcelona ayaa lafteedu samaysay isku dayo badan oo ay ku doonayeen in ay goolasha ku sii badsanaad.
Barcelona ayaa goolka 5-aad heshay kadib in badan oo ay raadisay waxana madax ku dhaliyay goolka xiddiga khadka dhexe ee Ivan Rakitic isaga oo ciyaarta ka dhigay 5/0 ay Barcelona ku raaxaysanayso Barcelona.
Waxa sidaas ku dhamaatay Ciyaar ay kooxda Barcelona xasuuq ba,an kula kacday kooxda Celta Vigo iskana xaadirisay wareega 8 dhamaadka tartanka